အကြံ့ခိုင်ဆုံး Kumamoto ရဲတိုက်ဟာ စားစရာတစ်ခုလား ?!!!! - JAPO Japanese News
လာ 04 May 2020, 18:57 ညနေ
ဆာမူရိုင်းတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက စစ်ပွဲအတွက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ရဲတိုက်တွေဟာ ဂျပန်မှာနေရာဒေသအလိုက် တစ်ခုစီရှိခဲ့ပါတယ်။ ရဲတိုက်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီး ရန်သူကိုဆီးပြီးတိုက်ခိုက်တာက လူအင်အားကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းဖြစ်စေတဲ့ စစ်ဗျူဟာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိပ်စီစဥ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီလိုရဲတိုက်တွေဟာ အရေအတွက်အများကြီးရှိတဲ့အထဲ၊ အတောင့်တင်းဆုံးရဲတိုက်ကဘယ်တစ်ခုလဲ?
အဲ့ဒါကတော့ ဒီ 熊本 Kumamoto ရဲတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတဲ့.. စားလို့ရတဲ့ တစ်ခုတည်းသောရဲတိုက်…
ကလေးတွေကိုပြောပြတဲ့ပုံပြင်တွေထဲမှာ စားလို့ရတဲ့မုန့်တွေရှိတဲ့အိမ်အကြောင်းရှိသလို၊ ဒီရဲတိုက်ဟာတကယ့်ရဲတိုက်အစစ်ဖြစ်ပေမဲ့ စားလို့ရတဲ့တစ်ခုတည်းသောရဲတိုက်လည်းဟုတ်တယ်။
熊本 Kumamoto ရဲတိုက်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြပေးမယ်။
熊本 Kumamoto ရဲတိုက်ကို တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ 加藤清正（かとう口きよまさ）Kiyomasa Kato ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ရဲတိုက်ရဲ့သခင်လို့ပြောကြပြီး၊ အဲ့ဒီ熊本 Kumamoto ရဲတိုက်က အားလုံးထဲမှာလက်ရာအပြောင်မြောက်ဆုံးပဲလို့လည်းပြောကြတယ်။
သဘာဝအလျောက်စီးဆင်းနေတဲ့မြစ်ကနေ အနံကျယ်တဲ့ရေမြောင်းကြီးတွေရဲ့ဝန်းရံထားခြင်းခံရပြီး၊ အပေါ်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြင့်တက်သွားတဲ့ကျောက်နံရံကြီးတွေ…
သို့သော် ရန်သူဘက်ကအတင်းအကြပ်လာတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးကြံရပါတော့တယ် ..
အဲ့ဒါကတော့ 兵糧攻め（ひょうろうぜめ）Hyōrō-zeme အစာရေစာထိုးစစ်ဆင်ခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်မှာရန်သူတွေကလာပြီးဝန်းရံထားတဲ့အတွက် အကယ်၍သင်ဟာရဲတိုက်ထဲမှာပဲခိုလှုံလိုက်ပြီးအပြင်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ရင် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှနောက်ဆုံးမှာအစာရေစာခေါင်းပါးသွားပါလိမ့်မယ်…
တကယ်အစာရေစာထိုးစစ်ဆင်လိုက်ရတဲ့ရဲတိုက်ဟာ၊ အစာရေစာပြတ်လက်သွားပြီး၊ ရဲတိုက်ထဲမှာတိုက်ခိုက်ဖို့နေနေသာသာ လူသေကောင်တွေကိုပဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်…
အစာရေစာထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့လူတွေက ရဲတိုက်ထျဲမှာစားစရာတွေမရှိတော့တဲ့အခါ အရင်ဆုံးစစ်မြင်းတွေကိုသတ်စားတယ်၊ မြင်းတွေလည်းကုန်သွားရော အာဟာရပြတ်ပြီးသေသွားတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကို စားသောက်ပြီးအသက်ဆက်ကြရတယ်။
သို့သော် အဲ့ဒါအခြေအနေကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေခဲ့တာကတော့ 熊本 Kumamoto ရဲတိုက်ပါ။
အထဲမှာခင်းထားtatami (ဂျပန်ဖျာ),ပုံမှန်ဆိုရင် 藁 Wara　လို့ခေါ်တဲ့ကောက်ရိုးနဲ့လုပ်ပေမဲ့၊ အဲ့ဒီနေရာမှာ အခြောက်ခံထားတဲ့ပိန်းရိုးနဲ့လုပ်ထားတယ်။
ရွံ့နံရံတွေကိုပုံမှန်ကတော့ ကောက်ရိုးတွေနဲ့ရောထားပေမဲ့၊ ဒီမှာလည်းပဲ ပိန်းရိုးခြောက်တွေနဲ့လုပ်ထားတယ်။
နောက်ပြီး 干瓢（かんぴょう）Kanpyō လို့ခေါ်တဲ့ ဆူရှီမှာထည့်သုံးတဲ့ဘူးသီးခြောက် စတဲ့အခြောက်ခံထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလည်း နံရံတွေမှာထည့်ပြီးသုံးထားပါတယ်။
နောက်ပြီးမျှားတွေကိုချည်ထားတဲ့ကြိုးကိုလည်း ワラビ Warabi လို့ခေါ်တဲ့အလေ့ကျပေါက်တဲ့မြက်ကို အခြောက်ခံထားပြီးကြိုးအနေနဲ့သုံးခဲ့ပါတယ်။
အခြားရဲတိုက်တွေလိုပဲ ဆန်တွေကိုရဲတိုက်ရဲ့ထောင့်တစ်ထောင့်မှာသိမ်းထားပေမဲ့၊ အဲ့ဒါကမရှိတော့ဘူးဆိုရင် ရဲတိုက်ထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ဒီစားစရာတွေကိုထုတ်စားပြီး ငတ်မွတ်တာကိုအချိန်တော်တော်ကြာထိန်းထားနိုင်တယ်။
ရဲတိုက်ကအရမ်းကြီးတဲ့အတွက် ဝိုင်းထားတဲ့ရန်သူတပ်အင်အားလည်း အတော်အသင့်များပါမယ်။
သို့သော် မည်သို့ပင်များပါစေ..ရဲတိုက်ကိုဝိုင်းထားတဲ့ကာလ ကြာလာနဲ့အမျှတော့ ရန်သူတပ်ဟာဇွဲတွေလျော့သွားမယ်၊ အင်အားလျော့သွားမယ်..ပြီးတော့
စစ်သားတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာသာမကဘဲ လယ်သမားတွေလည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာအိမ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် စိုက်ပျိုးရေးကိုထိခိုက်စေမယ်။
ဒါကြောင့် သင်ဟာရဲတိုက်ထဲမှာပဲ အချိန်ကာလတစ်ခုကိုသည်းခံနိုင်မယ်ဆိုရင် ရန်သူတပ်လည်းလူစုကွဲသွားမှာဖြစ်လို့ ပြန်မတိုက်ခိုက်ရဘဲပြီးစီးသွားမယ်။
တကယ်ကဒီရဲတိုက်ဟာ ဆာမူရိုင်းခေတ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာ အစိုးရအသစ်က ဒီရဲတိုက်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့ရာဇဝင်လည်းရှိတယ်။
အဲ့ဒီအချိန် အစိုးရဟောင်းနဲ့သူ့လူတွေကရက် ၅၀ နဲ့အထက်ရဲတိုက်ထဲမှာနေပြီး၊ အပြင်မှာဝိုင်းနေတဲ့ရန်သူတွေကိုသည်းခံပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ အညံ့မခံရဘဲလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်.
ဒါကြောင့် “ စားသုံးနိုင်တဲ့ရဲတိုက်” တစ်နည်းအားဖြင့်ရိပ်က္ခာခြောက်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ 熊本 Kumamoto ရဲတိုက်ကို အကြံ့ခိုင်ဆုံးလို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ဒီရဲတိုက်ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ရဲတိုက်ရဲ့တစ်နေရာဟာပြိုကျသွားပြီး၊ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ရဲတိုက်ကြီးကို ကျွန်တော်ကတော့ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်မြင်ချင်ပါသေးတယ်။….